Ohia osisi na-enye aka na okpomoku uwa | Network Meteorology
26 afọ gara aga ọ malitere nnwale nke na-eme n'oge a niile ma na-anwa ịchọpụta otu ọ si emetụta ya abawanye na okpomọkụ na ala ohia. Nzaghachi ndị ọkà mmụta sayensị nwetara na-ekpughe nzaghachi na usoro ịtụnanya.
Chọrọ ịmatakwu banyere nchọpụta nke nyocha a na mkpa ọ dị?
1 Ohia osisi
Nsonaazụ a nwetara site na nnwale a bụ ihe ndị a: ikpo ala na-akpali akpali oge bara ụba ịhapụ carbon n'ime ya na ikuku, na-agbanwe na oge nke enweghị ọnwụ na-achọpụta na nchekwa carbon. Nke a na-eme ka ọ bụrụ nke akpọrọ ma nke ahụ pụtara na, n'ime ụwa ebe okpomọkụ na-arịwanye elu, a ga-enwe mbara ala nke nzaghachi onwe onye ga-eme, nke ga-agbakwunye na nchịkọta ikuku carbon dioxide n'ihi na-ere oku fosil ga-enye aka mee ka okpomoku di oku.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a ga-enwe oge mgbe ahịhịa ndị na-egbu osisi ga na-ewepụtakwu carbon n’ ikuku na oge mgbe ha agaghị. Oge ahụ ga-esiwanye ike site na ịrị elu okpomọkụ ụwa nke ahụ ga-eme ka ala kpoo ọkụ, ya mere, na-eme ka carbon ọzọ banye n’ikuku.
Ọmụmụ ihe ahụ bụ ọrụ nke ndị otu Jerry Melillo, si na Biolọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ (MBL, maka mkpirisi okwu bekee), nke jikọrọ na Mahadum Chicago, na United States.
Nnwale ahụ malitere na 1991, mgbe n'otu mpaghara nke osisi na-adịghị mma na oke ọhịa Massachusetts ha liri eriri eletrik na ụfọdụ ala. Iji mee ka okpomoku zuru ụwa ọnụ, ha mere ka ala dị ọkụ karịa ọkwa ise dị elu karịa ụlọ iji tụọ n'etiti ha. Mgbe afọ 26 nke ka na-aga n'ihu, atụmatụ ndị mere ka ọnọdụ okpomọkụ ha dị elu site na ogo ise, Ha furu efu 17% nke carbon ọ na-echekwa na organic okwu.
Nke a na-eme ka ihe egwu nke okpomoku ụwa na-adịwanye nso ma sie ike ịkwụsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ohia osisi na-enye aka na okpomoku nke uwa
Ọkụ ọhịa ga-adị ize ndụ karị ma dịgide adịgide n'ihi okpomoku ụwa